Huwandu hweVanhu Vari Kuwanikwa Vaine Covid-19 Munyika Hunodzikira
Gunyana 04, 2020
Vanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu, kana kuti 1 095 ndivo vakavhenekwa kana vaine chirwere ichi, vanhu makumi mana vakawanikwa vaine chirwere.
Bazi rezvehutano rakazivisa neChina kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakanga kwasvika pazviuru zvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere, kana kuti 6 678, asi huwandu hwevafa hwakaramba huri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206 sezvo pasina akafa.
Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi munyika yose vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi matanhatu nevatatu, kana kuti 5 263, izvo zvakasiya vanhu vanosvika chiuru nemazana maviri nevapfumbamwe, kana kuti 1 209 vachiri kurwara nechirwere ichi.
Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica, iyo iri kutevera kupararira kwechirwere ichi inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu kuti 26,000 000 vabatwa nechirwere ichi pasi rose, chichiurayawo vanhu vanodarika zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe, kana kuti 869 000.
Vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zana nemakumi mashanu nechimwe kana kuti 6,151 000 vabatwa neCovid-19 muAmerica, umo vamwe vanodarika zviuru zana nemakumi masere nezvitanhatu zvine mazana masere kana kuti 186 800 vafa.
Mumwe chiremba, vachitaura vakazvimirira, Doctor Gilson Mandigo, vanoti hongu huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukwira asi chinofadza ndechekuti huwandu hwacho hwasiyana nepakatanga kuonekwa chirwere ichi munyika.
Asi Doctor Mandigo vanoti chimwe chinogona kuita sekuti vanhu vave kubatwa nechirwere ichi vave vashoma inyaya yekuti vanhu vari kuvhenekwa pazuva vashoma kwazvo pane zvinotarisirwa.
Panyaya yekuti vanhu vari kufa nechirwere ichi munyika vashoma zvichienzaniswa nekune dzimwe nyika, Dr. Mandigo vanoti izvi zvinoratidza kuti masoja evanhu achakasimba zvekurwisana nedenda iri, uyewo zvakare vanhu vemunyika vane makore ari kunyanya kuurayiwa nechirwere ichi kune dzimwe nyika, zvikuru vadarika makumi matanhatu, vashoma.
Asi vari kukurudzira hurumende kuti iwedzere huwandu hwevanhu vari kuvhenekwa Covid-19 pazuva, sezvo huwandu huri kuziviswa pazuva huri hushoma zvikuru pachitariswa huwandu hwevanhu varri munyika.